युवतीलाई आकर्षित गर्न यी ६ तरिका अपनाउनुहोस् ! - News Bihani
अक्सर युवाहरु सोचिरहेका हुन्छन्, कसरी युवतीलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने ? यसका लागि केहि ट्रिक्स अपनाउन सकिन्छ । कुनै युवतीलाई आफूप्रति आकर्षित गर्नु ठूलो कला हो । उनीहरु आफुप्रति सहजै आकर्षित हुँदैनन्, त्यसका निम्ति आफुसँग त्यस्ता गुण हुनुपर्छ जसले उनलाई प्रभावित गर्छ ।
यस्तो सौख राख्नुहोस्, जसमा उसको पनि रुची होस् । यसले तपाईहरुलाई जोड्ने काम गर्छ । आपसमा एकैनासको सौख छ भने तपाईहरु एक ठाउँमा आउनुहुनेछ । मिल्दो शौख पनि तपाईहरुबीचको मिलनबिन्दु बन्न सक्छ ।
आफ्नो व्यक्तित्वमा ख्याल राख्नुहोस् । चाहे लुगा लगाउने कुरामा होस् वा बोल्ने कुरामा, स्मार्ट देखिनुपर्छ । तपाईको प्रस्तुती पनि यस्तो हुनुपर्छ, जसले अरुलाई प्रभावित पार्न सकियोस् ।
मस्त इन्जोए गर्नुहोस्
यदि कुनै युवतीलाई मन पराउनुहुन्छ भने सबै कुरा छाडेर उनको पछाडि नलाग्नुहोस् । जसरी हुन्छ आफ्नो जीवनलाई लोभलाग्दो बनाउनुहोस् । रमाउनुहोस् र जीवनको भरपुर आनन्द लिनुहोस् । यस्तो मस्त जीवनशैली देखेर युवती स्वत तपाईप्रति आकर्षित हुनेछिन् ।
कति रहस्य खुलाउने
युवतीलाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो महसुष गराउनुहोस् कि, उनी तपाईको निम्ती कति विशेष छिन् रु यसका लागि तपाईले आफ्नो केहि गोपनियता वा रहस्य खुलाउनुहोस् जो कसैलाई सुनाउनु भएको छैन । यसले गर्दा उनले आफ्नो जीवनमा एकदमै स्पेशल फिल गर्नेछिन् ।
केहि गर्नका लागि भन्नुहोस्
के तपाई आफ्ना साथीका लागि हरेक काम गरिदिनुहुन्छ रु यदि त्यसो हो भने तपाई एक कदम अघि बढ्नुपर्नेछ । कहिले काहीँ उसलाई पनि आफ्नो काम गर्न लगाउनुहोस् । यसले उसलाई तपाईप्रति जिम्मेवार बनाउन सिकाउँछ ।
- उनीसँग सधै राम्रो वार्तालाप गर्नुहोस् । कुनैपनि कुरा गर्नुअघि सोच्नुहोस् । आफुले बोलेको कुरामा उसको कति रुची छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुहोस् ।
- बोलीचालीमा नाटकीयता झल्कनुहुन्न । प्राकृतिक एवं स्वभाविक रुपमा प्रस्तुत हुनुहोस् ।
– मनकारी र सहयोगी बन्नुहोस् ।
– युवतीलाई यस्तो महसुष नहोस् कि तपाई उसको पछि लाग्नुभएको छ । यद्यपी उसको हरेक कुरामा ख्याल गरेको महसुष गराउनुहोस् ।
– धेरै पटक भेट्ने, फोन गर्ने वा सहजै सम्पर्कमा रहने बानी ठीक होइन । यसले तपाईको महत्व नरहन सक्छ ।
मंगलवार, कार्तिक ४ २०७७०६:२४:०४
# युवतीप्रति आकर्षण